🥇 ▷ Sawirrada Google ayaa horey u aqrinaya qoraalka sawiradaada si loo wanaajiyo raadinta ✅
Sawirrada Google ayaa horey u aqrinaya qoraalka sawiradaada si loo wanaajiyo raadinta
Waqti kasta oo yar Sawirrada Google Ku dar warar xiiso leh arjigaaga. Mararka qaarkood horumarinnadaas si dhakhso leh ayaa loo hirgaliyaa iyo waxyaabo kale oo ay u baahan yihiin toddobaadyo tijaabo ah iyo hawlgal dalal kala duwan. Maanta waxaan ku dhawaaqi karnaa howl cusub oo la qabtay Sawirrada Google aamusnaan iyo badanaaba durba dalabkaaga. Waxay ku saabsan tahay shaqada aqri qoraalka sawirada ama sawirada aad soo celisay. Haa, Google hadda way aqrin kartaa qoraalka ay sawirradu leeyihiin, laakiin ma ahan qoraal ama cinwaan, laakiin qoraalka sawirka laftiisa.
Haddii aad isticmaaleysid Sawirrada Google Waad ogaan doontaa in dalabka uu ku yaal mashiinka raadinta ugu sareysa. Bar baartaas waxaad ku sheegi kartaa Sawirro si aad u raadiso walxaha, midabada ama cinwaanada sawir. Runtii sifiican bay u shaqeysaa kiisaska badanaaba waxay naga caawiyaan inaan helno muuqaalkaas aan raadineynay. Hadda wuxuu ku sameeyaa isla sawirka sawirrada.
Google wuxuu aqriyaa qoraalka sawiradaada si kor loogu qaado Sawirrada Google
Hawsha ayaa la hirgaliyay maalintii shalay si aad u deggan, iyada oo aan la casriyeyn iyo ogeysiis la’aan Google. Inta badan, waxaad horey ugu sameyn kartaa baaritaan noocan ah dalabkaaga, maadaama ay tahay wax laga hirgaliyay adduunka oo dhan iyo aaggaga dhan. Sidee buu u raadsadaa qoraalka qoraalka ah ee sawirrada Google? Hagaag, aad u fudud!
Kaliya waa inaad ka raadi eray ama erey ku yaal barta sare. Haddii eraygaas laga helo mid ka mid ah sawirrada aad ku leedahay Sawirrada Google, ka dib waxaa lagu soo bandhigi doonaa natiijooyinka raadinta. Haa, Google ayaa qoraalka ku aqrinaya sawirada, si kasta oo ay u yar tahay iyo booska ay ku jirto. Haddii la aqrin karo, Google wuu aqrin doonaa.
Qaabkani waa mid fudud ka hel sawirrada qaansheegashada, amarada ama tikidhada qadada sanadihii hore. Kaliya gali ereyga muhiimka ah ee aad u maleyneyso inuu ku yaal sawirkaas Googleuna wuxuu sameyn doonaa sixirkiisa. Haddii aad sawireysay sawir leh qoraal, Google sidoo kale way aqrin doontaa si ay ugu tusto raadinta haddii mid ka mid ah ereyada ku dhajiyay boostadaas lagu qoro barta baarista.
Waa mid ka mid ah howlaha ugu xiisaha badan ee xilligan la joogo ka raadi sawirro Google Photos Iyo maxaad isku dayi kartaa hadda. Haddaysan wali kuu oggolaanin inaad ku dhaqaaqdo raadinta noocan ah waad nadiifin kartaa kaarka codsiga ama sugi kartaa dhowr saacadood.